Indlela yokukrazula iingqondo zengqondo ezingamanga?
Ngamnye wethu, kwiminyaka ethile, kukho imithwalo ebonakalayo emva kwamagxa ethu - ulwazi, amava, ukudumazeka kunye nezihlandlo ezivuyo ... Kodwa kungakhathaliseki ukuba sisitshintsha njani nendlela esiyijonga ngayo ubomi, siyaqhubeka siphila ngeempawu ezifanayo kunye nezimo zengqondo ezibekwa kuthi ebuntwaneni nasekuqaleni kwentsha ...
Enyanisweni, oku kukwazi ukutshintsha "intloko" kusithintela kakhulu.Isikhumbuza ukuba sikhululeke ngento ethile, siphile ngokuzeleyo, ungesabi ngomso ... ake sicinge ngayo kwaye siphendule ngokunyanisekileyo ukuba ngaba ezi ngxelo zisebenza kuthi:
Enye inhlanhla ebomini, kunye nabanye-abalahlekelwa yintsholongwane.
Yonke into enikwe yona ngobunzima nobunzima.
Kwimi kwimimandla ethile kwixesha elingeyona nto ingabalulekanga.
Ibali elonwabileyo lobomi akulona ibali lam.
Kwaye ukuba ubuncinane umbuzo oyiphendulayo, kuthethwa ukuba kufuneka uqhube uphicotho engqondweni yakho, uqonde ukuba yiziphi iinkolelo eziphazamisayo ubomi bakho, kwaye ufunde indlela yokuzilawula.
Kodwa masiqale senze i-excursion kwixesha lethu elidlulileyo. Umntu ngamnye uvela ebuntwaneni, kwaye ukwazi kwethu into enjengomcoco wokucoca, oqokelela yonke into ayibonayo aze ayive. Kwaye kuxhomekeke kwinto engakumbi "yokunyusa" ukuqonda kwethu, kwaye ubomi bethu bukhula.
Siya kuchaza: ukuqonda kwethu kukuthi xa umntu efunda ukwenza into ngendlela enye, uyaqiniseka ukuba akunakwenzeka ukufeza umsebenzi ngenye indlela. Ngoko ke, isinyathelo sokuqala 'sokuphilisa kwisimo sengqondo' kukuhlaziya "inyaniso yethu."
Ngokuqhelekileyo sifumana naziphi na izizathu zokuzilungelelanisa. Umsebenzi awubi - akukho "shaggy paw", umyeni uyaphuza - zonke i-muzhiks ziyizidyobisi, lo mfana ungcono ukuba angahlangabezane naye - ungumfazi wesifazane, njl. Yiyo le ngcamango neemvakalelo ezingasivumeli ukuba sinike iziphumo ezilungileyo.
Kwaye isinyathelo esilandelayo sokuphicothwa kwethu kukuzibuza: Ngaba ndiyakuvuyela umphumo owamkelayo? Ukuba, nangona kunjalo, uyamkela ngokunyanisekileyo ukuba "iziphumo" zobomi bakho azihambisani nawe, ngoko kuyimfuneko ukuba usebenze nenkqubo yakho yenkolelo, kuba kungenxa yoko ukuba indlela yokubangela iingxaki zakho ikhona.
Izicwangciso zenziwe kwintsapho kunye nemeko-le ngxaki. Iveki yehlabathi yomzali inefuthe elikhulu ekucingeni kwabantwana nakwihlabathi elizayo. Omnye wabazali ufuna ukukhulisa umntwana ngomfanekiso wakhe nomfanekiselo, ngokusekelwe kumava akhe. Abanye bafuna ukuphakamisa inqwaba ecaleni, ukuze ubomi bomntwana bube bhetele kunabo. Kwaye kuphela inxalenye encinci yabapapa noomama bacinga ukuba umntwana unomntu wakhe, omele uqiniswe. Ukongeza kwabazali, iimbono zethu zehlabathi kunye neenkolelo, eqinisweni, zichaphazelekayo kuluntu. Umntu wenziwa ngaphambi kokuba aneminyaka engama-25, kwaye njengoko sikhula, nayiphi na iqela loluntu (isikolo, isitrato, isiko, umsebenzi) unempembelelo ngqo okanye engathanga ngqo kwinkqubo yethu yenkolelo, apho esiza kubona khona, ukuvavanya nokwenza. Ngamanye amazwi, inkqubo yethu yenkolelo ifana neiglasi, apho sibona ubomi kuyo yonke imzuzu. Kwaye kuxhomekeke kule ngcamango, yiyiphi inyathelo esiyikhethayo kwiimeko ezithile.
Kuyinto engafanelekanga eyenzeka ukuba sikholwe kwiingcinga ezikhoyo kwingqondo. Masithi, ngolunye usuku, ngenxa yobuvila bakho okanye ngexesha lokuhlaselwa komoya, wanquma ukwenza "izenzo" ezithile, kodwa ezi zinto zange zomelele kwaye zincinci, azibonanga uxinzelelo olufanelekileyo kunye nokunyamekela ekufezeni umsebenzi. Ngako oko, iziphumo zemizamo eyenziwe idakalise. Ukusuka apha, uyaqaphela ngokugqithiseleyo ukuba nayiphi na into eyenziwa ngayo kule ndlela ibangela iziphumo ezingabalulekanga. Yaye ukuba le nto iphinda iphindwe kaninzi, umntu uyakhela ingcamango yokuba akakwazi ukwenza okungakumbi, oko kukuthi, uyaqaphela ngokukhawuleza ukukhawulela amandla akhe. Ngesinye isikhathi, umntu onje uya kucinga ukuba amandla akhe amancinci, ngoko ke, uya kusebenza kude kwaye akhuthele. Umzekelo, sinikwe isikhundla esiphezulu kunye nesigxina, indawo entsha yomsebenzi, sinokungabaza (nangona sifuna ukunikela!) Kwaye kwanqaba, kuba "andizange ndisebenze kule ndawo, andiqinisekanga ukuba ndingakwazi ukulawula" okanye "oku kungekhona yam. " Kuvela ukuba abanye kuthi bakholwe, kwaye thina ngokwethu?
Umonakalo olandelayo obangelwa yienkolelo ezingenakuxanduva, xa sinokungabaza abanye, sizalisekisa umphumo ongeyiphumo kwaye sisebenza kwi-prism yeenkolelo ezenziwe. Yaye ngubani oya kuthanda, bayithandabuza ntoni? Ngoko silahlekelwa ngabahlobo ...
Ngokudla kaninzi, indima yabo engathandekiyo idlaliswa yienkolelo kwiindawo ezifana nothando, imali, iingcamango zomntu. Asifuni, ngoko sinoyiko lokwenza iimpazamo, ukuba ngokusilumkisa siqala ukukhetha ezo nkolelo, kwiingcinga ezisishukumisela ukuba senze isigxina-ntliziyo, ngaphandle kokuzinikela ngokupheleleyo kwinkqubo. "Musa ukubeka uxinzelelo kumntu, ungabonakali okokuqala, ndiza kwenza oku kuphela okanye oko-nangaphezulu - kulo mvuzo." Andiyi kubonisa iimvakalelo, ngaphandle koko uyazikhukhumeza aze asebenzise kakubi imvakalelo yam "... Ezi zicwangciso ezingalunganga. Kunoko, kubalulekile ukugxila ekudaleni ezo nkolelo ezinokukunceda ukuba ube ngokwakho, ukuthetha ngokukhululekile, ukwenza iimpazamo, ukulungisa, ukunyamezela i-fiasco. Oko kukuthi, phila ngamandla!
Utshintsho oluncinane kodwa oluphawulekayo endleleni yokucinga lunokuvula indlela eya kwimpumelelo enkulu. Bonke abantu abaye baphumelela impumelelo kwaye baphumelele ebomini banokuxhamla, i-psychologists ithi. Yiyiphi na indlela yokuzikhupha ngayo?
Ukusetyenziswa kweproactivity yipropati ebalulekileyo yendalo yabantu, ukunceda, nangona iimeko, ukuphumeza iziphumo. Le ngcamango iquka:
Umsebenzi ngumsebenzi osebenzayo. Akukho nto engabonakaliyo kwaye engadingekile, yonke into yinto yokwakha yendawo yangoku kunye nekamva.
Uxanduva luyindlela efanelekileyo yokukhetha, izicwangciso kunye neziphumo. Musa ukwenza okuqhelekileyo okanye okwenziwe kuwe sele sele iwaka lamawaka. Nokwenza oko kuyimfuneko ukufezekisa umphumo ophezulu. Yaye ukuba uhlalutya ubomi bakho kwaye uqale uhlala ngokuqhubekayo, iziphumo aziyi kudala. Ngoko qhubeka - ungesabi ukwakha ikamva lakho!
Phendula le mibuzo 10:
Ngaba abantu bazingca okanye awufumani indlela efanelekileyo yokuchaphazela abantu?
Yintoni engcono: ukubeka ingozi okanye ukuzisola ngamathuba alahlekileyo?
Yintoni oyikhathazayo ngoku: ukwenza izinto kakuhle okanye ukwenza izinto ezilungileyo?
Yintoni eningayifanele niyiqwalasele, kwaye yintoni ebaluleke ngokwenene?
Ngaba kufanelekile ukusukela ixesha kwaye uzama ukwenza konke ngexesha okanye ukuyeka izinto kwaye uhlale kwisigqi sakho?
Ngaba ucinga ukuba abanye bakulungile ukuba banet talente, banenhlanhla, banokuziphendulela ngaphezu kwakho, okanye unayo (okwamanje) idayimani engenziwanga?
Ukhetha ntoni: ukuchitha ixesha lakho, uzalise i-bumps okanye, ekugqibeleni, udala ubomi obonwabileyo?
Uza kukhetha ntoni: ukuhlala ngemvava ukuya kwiinkwenkwezi (kwaye akukho into) okanye ukufunda indlela yokucinga ngempumelelo?
Ziziphi izithintelo zobuqu obomi bakho obuzaliswa ubomi obuya kufuneka upheliswe?
Ngubani okanye into enokukunceda ukuba uphumelele kothando, umsebenzi, iimali?
Emva kokuba uphendule le mibuzo, usuvele unomfanekiso wezinto ofunayo ngoku kuwe, ebomini bakho, kunye naziphi na izihlandlo ozifunayo ukuhlaziywa.
Zivumene ngendlela esiyiyo
Ngaba kulungele ukupha?
Umona wabanye. Indlela yokuzikhusela?
Indlela yokuphuhlisa ukuzingca
Inkomfa yeCinderella: njani ukulwa nayo?
Indlela yokufunda ukulawula amaphupha akho
Isiseko semvelo somntu kunye nempembelelo yakhe kwiintsebenziswano
I-Cocktail ye "City Walker"
I-Shrimp kwi-sauce eluhlaza
Ukuhlalisa abantwana nge-scoliosis
Iikhamera zeCCTV zibhalise ukuhlaselwa kukayise kaZhanna Friske kuDemetriya Shepeleva
UDmitry Malikov uya kubiza uNatalia Poklonskaya ngenxa ye-PR
Irises - umyezo odibeneyo wegadi
Iingubo eziphathekayo zentwasahlobo ka-2010
Indlela yokufumana ubunzima bokukhulelwa
Imfihlelo emincinci yobuthongo obuhle bentsana
Julayi 6 - Usuku lwe-Kiss Kiss
Umyeni waseDmitri Hvorostovsky wasweleka, wamshiya abantwana abathathu
"I-Wave Wave 2016": iixesha eziqaqambileyo zosuku lokuqala, iifoto kunye namavidiyo
Jongana neemaski ze-kefir
Ngaba iimpawu zokuzalwa ziyingozi?
Unyango lokutshiswa kwabantwana abanezicwangciso zengqondo
I-pie kunye ne-coconut chips
Ukutshatyalaliswa kwabantwana abancinci